ဘယ်လိုအခြေနေမျိုးတွေမှာ အလုပ်ထွက်သင့်သလဲ? - Sales Training Programs by Charisma
People work for people တဲ့။
ကျွန်တော်တို့ ဒီစကားလေးကိုကြားဖူးကျမယ် ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ career life မှာ (ကံကောင်းရင်) တစ်ခါ၊ (ကံမကောင်းရင်) ခဏခဏ မကောင်းတဲ့ မန်နေဂျာနဲ့ ဘော့စ်တွေကို ကြုံတွေ့ရစမြဲ (စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်း တခါက ခေါင်းဆောင်ဆိုးတစ်ယောက်အောက်မှာ အလုပ်,လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်၊ တကယ်ပါ ဘဝမှာ စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတဲ့နေ့ရက်တွေနဲ့ နိစ္စဓူ၀ အကုသိုလ်များနေရတဲ့ ကာလတွေပါပဲ!)
ဒီလိုကြုံတွေ့လာတဲ့အခါ အလုပ်ထဲမှာ မပျော်၊ မပျော်တော့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကျဆင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းတော့ ရလာဒ်မကောင်း၊ ရလာဒ်မကောင်းတော့ လူကြီးနဲ့ ပိုအဆင်မပြေဖြစ်ပြီး ဂျာအေး သူ့အမေရိုက်သလိုဖြစ်ကာ အလုပ်သေအောင်ထွက်ချင်နေသူတွေ(ထွက်လည်းထွက်ခဲ့သူတွေ)၊ အလုပ်သွားရမှာကို ခဲဆွဲထားသလို စိတ်လေးလံပြီး စိတ်မပါသူတွေ စာဖတ်သူတွေထဲမှာ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။
People don’t leave jobs, they leave bad managers & bad bosses!
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်အလုပ်ကို စွန်ခွာတာမဟုတ်ပါဘူး၊ မကောင်းတဲ့ မန်နေဂျာတွေနှင့် ခေါင်းဆောင်ဆိုးတွေအောက်မှာ အလုပ်မလုပ်ချင်တာဟာ Organization တိုင်းမှာ ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ထွက်ရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းအရင်းလို့ဆိုပါတယ်..။
Monday တိုင်းဟာ blue လာပြီဆိုရင်တော့ မကောင်းတော့ပါဘူး၊ အလုပ်ထွက်လိုက်ပါလို့ပဲ တိုက်တွန်းပါရစေ။
ဒီလိုဆို…မေးစရာရှိလာတာက ဘယ်လိုအချိန်မှာ အလုပ်ထွက်သင့်သလဲဆိုတာပါပဲ..။ အောက်မှာဖော်ပြမယ့်အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီရင် အလုပ်ထွက်ဖို့ကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ့် မန်နေဂျာ(သို့)အထက်လူကြီးဟာ ကိုယ့်ဖက်က လုံးဝဥဿုံ မှန်နေရင်တောင် ကိုယ့်ဖက်က မရပ်တည်ရဲဘူး။
ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လုပ်နေပြီး အနာဂါတ်အမြင် (vision)နှင့် မဟာဗျူဟာ(strategy) မရှိပဲ လုပ်ချင်ရာ လုပ်ချင်နေတဲ့သူ။
ကိုယ့်အတွက် ဘာမှပညာရစရာ၊လေ့လာစရာ မရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းမျိုး။
“နကန်းသေ ငစွေပေါ်” ဆိုတဲ့ စကားကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ယုံကြည်ပါတယ်၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ်သူဆိုတာတော့ မရှိပါဘူး။ သူမရှိတော့ရင် သူ့ထက်ပိုတော်တဲ့သူ ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဝန်ထမ်းတွေဟာ “မိမိကို အစားထိုးလို့ရတဲ့ ရုံးက စားပွဲခုံ တစ်ခုလို” ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။ လူမှန်ရင် မသိမသာရော၊သိသိသာသာရော အသိအမှတ်ပြုခံချင်ကြသူကြီးပါပဲ။ အသိအမှတ်ပြု (appreciation) မခံရတာ တော်တော်ဆိုးဝါးပါတယ်။
ကိုယ့်လောက်မှ မတော်၊မတက်၊အလုပ်မလုပ်တဲ့သူတွေကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခင်မင်မှုကြောင့် ရာထူးတိုးပေးခြင်း။
အထက်လူကြီးတွေဆီမှာ ကိုယ့်အတွက် အနာဂါတ်မရှိဘူး၊ စဉ်းလည်းမစဉ်းစားထားဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကို အလေးမထားဘူး။
Micromanaging လုပ်တက်တဲ့ သူ (အမြဲတမ်း) ကိစ္စအသေးအမွှားလေးတွေနဲ့ အလုပ်များနေပြီး အစစအရာရာ ရာထူးနဲ့မှမလိုက် ဝင်ပါနေတက်သူမျိုး။ Micromanaging ဟာ တော်တော့် တော်တော်ကြီးကို ဆိုးရွားပါတယ်!
ကိုယ် ဘာလုပ်လုပ် အကောင်းမမြင်ပေးဘူး။ အမှားသေးသေးလေးတွေ လိုက်ထောက်နေတက်တဲ့သူမျိုး။
အထက်လူကြီးသည် သူ ကိုယ်တိုင်ထုတ်တဲ့ စည်းကမ်းကို မလိုက်နာပဲနေသူ။
The narcissist – အဆိုးဆုံးတွေထဲက တစ်ခုပါ..။ သူကိုယ်တိုင်နဲ့ သူ့အတွက်သာဆိုတဲ့ “မိမိကိုယ်သာ အချစ်ဆုံး”နှင့် “မိမိရာထူးတိုးရေးသာ ပဓာန”ဆိုတဲ့ ဝါဒနဲ့ သူမျိုးတွေပေါ့။
ဒီလိုလူတွေနဲ့ တွေ့လာရပြီ သတိထားပါ၊ သူတို့ဟာ ကိုယ်လုပ်လို့ရလာတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို သူတို့လုပ်သလိုလို အမှတ် (credit) ဝင်ယူပြီး ပြဿနာဖြစ်လာရင် ပုံချတက်တဲ့ သူတွေပါ။ တစ်ခုကံကောင်းတာက….သူတို့လိုလူမျိုးတွေ ရာထူးတိုးရင် (သူကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်လို့) ခင်ဗျားကိုပါ ဆွဲခေါ်ကောင်း ဆွဲခေါ်သွားပါလိမ့်မယ်၊ ခင်ဗျားဟာ သူ့ကိုကျော်ပြီး ရှေ့ထွက်လာတဲ့နေ့ဟာ ပြဿဒါးနေ့ပါပဲ။ ပြီးတော့ ဒီလိုလူမျိုးတွေက အမြှောက်ကြိုက်ပါတယ် ဒီတော့ ဟုတ်ဟုတ်/မဟုတ်ဟုတ် သူတို့ဘယ်လိုတော်ကြောင်း ပေါက်တက်ကရ မြှောက်ပြောပြီး ပေါင်းနိုင်ရင်တော့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူဟာ အထက်ပါအချက်တွေထဲက တစ်ချက်ထက်မက ငါးချက်ကျော်လောက် ကိုယ့် အလုပ်ခွင်မှာကြုံနေရပြီဆိုရင် ကိုယ် CV တင်ထားတဲ့ company (သို့) recruiter က ဆက်သွယ်လာရင် ဖုန်းကိုင်လိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း နောက်အလုပ်သစ်တစ်ခုမရသေးပဲ အလုပ်ထွက်ဖို့ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက်တော့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ဆိုတော့ နောက်အလုပ်သစ်တစ်ခုကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ဆုပ်ကိုင်နိုင်ပြီဆိုမှ အလုပ်ထွက်ပါ။ ထွက်စာတင်ပြီး ခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုတာနဲ့ “လွတ်ပြီ၊ကျွတ်ပြီ၊ထွက်တော့မယ်” ဆိုပြီး အချောင်မခိုပါနှင့်။ ကိုယ့်နေရာဝင်ရမယ့် လူကို လွှဲစရာရှိတာ အကုန်လွှဲပေး အားလုံးကို ကူညီ တက်တက်ကြွကြွ အလုပ်လုပ်ပြီး ကောင်းသောထွက်ခွာခြင်းနဲ့ ထွက်ပါ။ အထက်လူကြီးကောင်းခြင်း၊ဆိုးခြင်းသည် သူ့သမိုင်း ကိုယ်ကောင်းဖို့သာ အဓိကပါ။ သူ့အမှားကနေ ကိုယ့်အမှား မဖြစ်စေဖို့ သတိပြုပါ။
ဖတ်ဖူးတဲ့ဟာသတစ်ခုထဲကလိုပြောရရင် ဝန်ထမ်းတစ်ယောက် သူ့ရဲ့အလုပ်နောက်ဆုံးရက်မှာမှ HRဆီက အလုပ်ထွက်စာကို ပြန်တောင်းတော့ ဟိုက အံ့သြပြီး ဘာလို့လည်းမေးတော့ “ကျွန်တော့် မန်နေဂျာလည်း အလုပ်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီမှာပဲ ဆက်လုပ်တော့မယ်” ဗျာ တဲ့။